Queer Tango: Fiovàna Iray Amin’ny Nentin-drazana Manome Vàhana Ny Fahasamihafàna Sy Fampidirana · Global Voices teny Malagasy
Queer Tango: Fiovàna Iray Amin'ny Nentin-drazana Manome Vàhana Ny Fahasamihafàna Sy Fampidirana
Voadika ny 20 Oktobra 2016 8:44 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, русский, Español
“Tantara an-tsehatra Rosiana” Pikantsary tamin'ny lahatsary doka fo an'ny Fetibe Queer Tango 2016 tao Maosko.
Amin'ny fanaovana ny tango ho iraisam-pirenena, adino ireo fototra niaviany amin'ny maha-avy amin'ny faritra sahirana azy ary dihy iray ahitana kaody tena matotra no naondrana, miaraka amin'ireo andraikitra mazava tsara voafaritra ho an'ireo lehilahy sy vehivavy. Ao amin'ireo milongas nentin-drazana- faritra ao Arzantina alehan'ny olona handihizany tango – mipetraka amin'ny sisiny iray eo amin'ny toeram-pandihizana ireo vehivavy mba ho hitan'ireo mety ho mpiara-mandihy aminy fa vonona azo alaina izy ireo. Manao fihetsika amin'ny lohany ny lehilahy mangataka vehivavy iray mba handihy hiaraka aminy ary manaiky na mandà ny fikasàna kosa ilay vehivavy. Eo dia manomboka ny dihy izay ny lehilahy no mitondra ary manaraka ireo toromarika omena, mandravaka ny dihy amin'ny alalan'ireo haingo samihafa kosa ilay vehivavy.
Tato anatin'ny taona vitsivitsy, anefa, nanomboka nifininanan'ny olona ny ho tompondaka amin'ny Queer Tango, miaraka amin'ny queer adika ara-bakiteny hoe “tsy fantatra”, “hafahafa”, “vangavanga toetra”. Ny teny hoe “queer” araka ny nentim-paharazana dia nampiasaina hanambaniana ny olona manana lenta na toetra ara-pananahana manokana, saingy taty aoriana nalain'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ sy ireo fandalinana mitrandraka ny tolon'izy ireo. Araka izany, tsy mikatsaka fotsiny fananganana habaka ho an'ny vondrom-piarahamonina pelaka ny Queer Tango mba hilazany ny heviny amin'ny alàlan'ny dihy tango, fa manome fahafahana ho an'ny olona rehetra, na inona inona karazana ara-pananahana misy azy, mba hitrandraka ny momba azy sy handeha lavidavitra mihoatra ireo fenitra sosialy apetraka momba ny maha-lahy na vavy. Tahaka izay hazavain'ny bilaogin'ny Queer Tango ao Buenos Aires hoe:
Sehatra ho an'ny tango misokatra ho an'ny rehetra [ny Queer Tango]. Toerana iray hihaonana, hifaneraserana ara-tsosialy, hianarana, ary hampiharana izay mikendry mba hitrandrahana ireo endrika samihafan'ny fifandraisana eo amin'ireo mandihy. Tsy isarihana an'ireo mpandihiny hirona amin'ny ara-nofo na ny fitiavany hibodo ny toeran'ny iray na ny iray rehefa mandihy akory ny queer tango.
Na tany amin'ny voalohany indrindra aza, ireo lehilahy irery ihany no nandihy ny tango, tao anatin'ireo milongas nentim-paharazana ankehitriny, samy niharan'ny fanavakavahana ireo olona miaraka mitovy taovam-pananahana, eny fa nesorina tsy ho eo ambony kianja fandihizana mihintsy aza. Raha ny marina, teraka teo ireo “queer” milongas marobe ho valin'ireny fanafihana ireny.
Ao anaty lahatsary eto ambany, nozarain'i Edgardo Tucu tamin'ny YouTube, afaka mahita lehilahy roa mifanakalo anjara asa nentim-paharazana amin'ilay dihy ianao, nandritra ny Fetibe Iraisam-pirenena ho an'ny Queer Tango 2015 tao Buenos Aires:
Ho an'ny maro, dihy fanambonian-tenan'ny lehilahy ny tango izay mametraka ireo vehivavy ho mpidonàka fotsiny. Na izany aza, tato anatin'ny taona vitsivitsy no nahitàna ny fitobahan'io endrika tango vaovao io, lasa mandray anjara kokoa ny vehivavy. Raha ny marina dia maro ireo vehivavy dieny ety am-boalohany no mametraka fa izy no mpitondra ny dihy. Amin'ny Queer Tango, afaka mitondra na entina koa ireo vehivavy rehefa entin'ny lehilahy na vehivavy hafa mandihy.
Ao anaty lahatsary eto ambany, nozarain'ny Tango Queer tamin'ny YouTube, vehivavy iray no mitondra, raha ilay iray hafa kosa manaraka ireo dingana voalaza:
Mariana Docampo, vehivavy iray amin'ireo mpisavalalan'ny Queer Tango ao Buenos Aires, manazava ao amin'ny bilaoginy fa ny hevi-dehibe amin'ny fihetsika amin'ilay dihy dia tsy tena hoe fanatsimbadihana ireo andraikitra akory, kanefa io tena ampahany amin'ny firafitry ny dihy tango mihitsy. Ny olana dia mitranga eo amin'ny “fitazonany sy ny famaritany ny tenany amin'ny sokajin'olona misy ireo mpandihy” ary afaka mampivaingana hatrany amin'ny lalina indrindra ireo fitsaratsaràna ara-tsosialy aza:
Dihy malaza ny tango sady, sahala amin'ireo dihy hafa rehetra, atao hitarafana ny fiarahamonina izay niaviany sy nitomboany izy. Amin'io tranga io, dia ny fiarahamonina ao Buenos Aires. Saingy dihy iray mampiseho fanaitairana ara-nofo henjana ihany koa ny tango. Ka noho izany, mitondra taratra betsaka kokoa mihoatra ny fomba iray ijeren'ny fiarahamonin-tsika ny fihantsiana ara-nofo io “fitaratra” io eny anivon'ireo mpikambana ao aminy: voalohany, lahy-vavy. Avy eo, afaka milaza isika, mavitrika-mpidonàka.
Tohizany milaza fa:
io fiarahana tsiroaroa io dia manatsotra ny tranonkala goavana miresaka fanaitairana ny ara-nofo misy eo amin'ny isam-batanolona. Ary raha toa io manondro maro an'isa azo fantarina ao anaty fiarahamonina, dia mametraka fomba fahatsapàna iray “ankatoavina”, no sady manefy no manivana ireo fomba fahatsapàna samihafa. Apetraka ho toy ny lasitra io. Ary ivelan'io lasitra io no mitoetra ny rehetra izay manana fihetsehampo hafa.
Tsy maintsy mitady ny toerany manokana ivelan'ny milongas nentin-drazana ny queer Tango. Amin'ny tranga manokana ao Buenos Aires, misy milongas “hafahafa” sy “pelaka” isank-karazany izay ahafahan'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ mandihy tsy iharan'ny fanavakavahana. Habaka fampidirana sy misokatra ho an'ny rehetra ny Queer Tango. Ao amin'ny lahatsary nozarain'i Narkotango eto ambany, hitantsika ny olona roa mitrandraka sy mifanakalo ireo andraikiny mandritra ny dihin'izy ireo tamin'ny iray amin'ireo milongas queer tao an-drenivohitr'i Arzantina:
Ben'ny tanàna fahiny tao Tiorkia milaza fa nahita tahirina vatomamy (jellybeans) nafenina ireo tomponandraikitra
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 15 ora izay
Ho an'ireo mpikatroka ho an'ny tanora, politikam-panjarian-tsakafo araka ny tokony ho izy no ilaina hitsinjovana ny hoavin'i Jamaika
Karaiba 17 ora izay
Antsafa 23 ora izay
Pakistàna: Sazy henjana kokoa ho an'ny fanolanana, isan'izany ny famosirana amin'ny fomba simika
Azia Atsimo 08 Desambra 2020